Takhalusid files ka dibna doonaya inuu ka soo kabsado iyaga waa xaalad aad caadi u ah. Nasiib wanaag, softwares badan u soo kabashada file ka jira. Laakiin Softwares kuwa shaqeeyaan oo kaliya ku dhufto ee gaarka ah sida Windows ama OS X. Laakiin, waxa dhacaya marka aad tirtirto xiriirada ka Gmail ama Muuqaalka xisaabta? Ama xitaa ka casriga ah, iyadoo aan loo eegin haddii ay tahay Android ama iPhone?
Warka wanaagsani waa, dhammaan xiriirada tirtiray la raadsan karo. Waxaan aad u soo Casharrada gaaban oo fudud u soo kabsaday xiriirada tirtiray ka Gmail, Outlook, Android ama iPhone.
Ceshano Xiriirada tirtiraa Gmail
Google Xiriirada waa weyn yahay marka ay timaado qolka kaydinta Cinwaanada iyo macluumaadka oo dhan saaxiibadaa iyo kuway isbarteen. Laakiin, Google Xiriirada mararka qaarkood ku darayaa xiriirada aad u badan oo aan loo baahnayn. Markaas, waxaad ku khasban yihiin in midkood sii info ee aanad u baahnayn ama u tirtirto. Haddii aad doorato in aad tirtirto xiriiro, ka dibna waxaa aad u sahlan in aad laga yaabaa in la tirtiro xiriir ah oo aad weli u baahan tahay. Bishaaradayda waa in Gmail Xiriirada uu awood u leeyahay in ay soo celiso xiriirrada tirtiray. News xun waa in la soo celiyo qaab dhismeedka waqti karaa oo kaliya ee hore 30 maalmood. Raac saddex tallaabo oo sahlan si loo soo celiyo tirtiray xiriirada Gmail aad.
First of dhan, waxaad u baahan tahay adigoo gujinaya fallaadha yar ee geeska bidixda ah ee kore, soo socota si ay Gmail. Markaas, dooro Xiriirada.
Ka dib markii doorashada Xiriirada, si fudud guji badhanka More. In menu siiyey, waxaad arki doontaa doorasho lagu magacaabo Celinta xiriiro.
Hadda, waxa kaliya ee aad u samayso waa in aad doorato qaab dhismeedka waqti ee 30-kii maalmood ee la soo dhaafay. Ka dib markii doorashada jir markii, guji soo celi. Taasina waa quruxsan u badan. Simple, miyaanay ahayn?
Ceshano Xiriirada tirtiraa Muuqaalka
Waxa isku mid ah u dhaco, waayo, Outlook. Hadda, waxaa laga yaabaa in aad isticmaasho Outlook.com ama Microsoft Outlook (kaas oo ka yimaadaa la Microsoft Office). Wax macno ah ma taas oo mid ka mid ah oo aad u isticmaali, sababtoo ah waxaan dabooli doonaa oo labadoodaba waxaa ka. Sida Gmail, Outlook.com kuu ogolaanaya in aad kaliya inuu ka soo kabsado xiriirrada in la tirtiray ee 30-kii maalmood ee la soo dhaafay. Aan ka bilaabaan!
Kadib markii in si Outlook, guji square icon yar dhibcaha ee geeska bidixda ah ee kore. Oo halkaasaannu ka dooran category Dadka.
Hadda oo aad u dooratay "Dadka", guji badhanka Maamul. Markaas, waxaad arki doontaa fursado badan. Waxaad doonaysaa in aad riix mid ka mid labaad - Celinta xiriir la tirtiro.
Ka dib markii doorashada Doorashadan, doortaan xiriirada aad rabto in la soo celiyo, oo guji soo celi. Waa sidaas. Easy sameeyaa, sax? Hadda, aan aragno sidii ay u soo celin xiriirada tirtiray ka Microsoft Outlook.
Soo celinta files tirtiray iyo xiriirada ka Microsoft Office ayaa suuragal ah keliya haddii aad isticmaalayso xisaab Server Microsoft Exchange.
Tallaabada ugu horreysa waa in guji Folder, ka dibna Ladnaansho Items tirtiray. Haddii Doorashadan la heli karin, markaas aad uma isticmaalaya xisaab Server Microsoft Exchange, iyo soo celinta xiriirka la tirtiray suurtogal ma aha.
Taasina waa quruxsan u badan. Dhammaan waxaa la tagay inuu sameeyo waa in aad doorato oo tirtiray waxyaabaha aad rabto in aad soo kabsado.
Ceshano Xiriirada tirtiraa Android
Ujrooryinka xiriirada tirtiray ka Android waa ka sii yara murugsan badan fursadaha hore ee dib u soo kabashada. Waxaad u baahan doontaa software loo yaqaan Android Data Recovery. Waxaad ka badhamada hoos ku soo bixi kartaa software ah.
Kaa caawinaysaa in aad soo kabsado xogta, taas oo ay sababta loo waayey dib warshad, dhaawac, shil iyo Laydh iftiimaya ROM.
Shakhsi ahaan Dooro maxay Android Faylal ay rabtaa in ay soo kabtaan.
Markaas, waa in aad la rakibi qalabka kabashada Android. Waa arrin aad u fudud in ay gashato, kaliya raacaan hage Mudanayaasha. Hadda, halkaas weeye meesha Sixira bilaabo.
Connect telefoonka aad Android in aad PC adiga oo isticmaaleya isticmaale cable USB. Orod software ah. Ka dib markaad furto, software wuxuu ku siin doonaa tilmaamo ah sida loo awood debugging USB.
Markaas Android Data Recovery kuu ogolaaneysaa in aad doorato oo noocyada kala duwan ee files aad jeclaan lahayd inay ka soo kabsadaan. Haddii aad rabto in aad soo kabsado aad xiriirka la leedahay oo keliya, si fudud u dooran xiriiro.
Hadda, tallaabada xigta kuu ogolaanayaa inaad iskaan dhammaan faylasha ama faylasha tirtiray kaliya. Haddii aad rabto in aad si loo badbaadiyo waqtiga aad, iyo aad hubto in xiriir la tirtiray, kadibna dooran Scan for files tirtiray.
Hadda, aad qabtid in ay raacaan tilmaamaha fudud siiyey Android ay Data Recovery. Tilmaamaha ayaa ku tusi sida ay u oggolaadaan software aqoonsan telefoonka.
Ka dib markii ay si guul leh qalab la aqoonsan yahay, guji scan iyo sugin sixir si ay u dhacaan. Dhamaan xiriirada aad la tirtiro tusi doonaa, oo waxaad awoodi doontaa inaad doorato kuwa ha aad rabto in aad dib u soo ceshano.
Ceshano Xiriirada tirtiraa iPhone
Luminta faahfaahinta xiriirkaaga Waa caadi in dadka isticmaala iPhone, sidoo kale. Mar kasta oo aad iPhone xidhmi doontaa PC, Lugood si toos ah syncs dhammaan xogta aad iPhone ee database. Sidaas, haddii aad leedahay gurmad ah ee xiriirada aad u sahlanaan doonto si ay u soo ceshano.
Sida Apple ee iPhone uu noqday meel ay dooneen kadib dunida dukaamada waaweyn, mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee ku dhici kartaa marka aad isticmaalayso casriga ah waa in laga yaabaa in aad lumiso faahfaahinta xiriirkaaga by shil ah. Jailbreak, macruufka cusboonaynta ama soo celinta in goobaha warshad masixi laga yaabaa in macluumaadka aad, laakiin in macnaheedu aanu ahayn, waxaa la weligiis tageen. Wakhti kasta oo aad ku xidhi aad iPhone in aad PC, Lugood si toos ah syncs xogta ku iPhone ee database. Ilaa iyo inta aad heysato gurmad ah ee aad xiriirka la leedahay, aad awoodo iyaga soo kabashada ka iPhone si fudud.
Waxaad sidoo kale soo kaban karto, xiriirada iyada oo kaabta Lugood ama baarista iPhone si toos ah haddii aadan haysan gurmad lagama maarmaanka ah.
Haddii aad doorato inuu ka soo kabsado xiriirkaaga iyada oo kaabta Lugood, halkan waa tallaabooyinka waa inaad raacdaa:
1. Ka hor inta xira iPhone, reserved Lugood si aysan si toos ah u hagaagsan waqtigan.
2. Isku aad iPhone in aad PC ama Mac.
3. Open Lugood, xaq-guji qalab aad iyo dooran "Soo Celinta kaga imaanayo."
Haddii aadan u hagaagsan aad iPhone, markaas waa in aad kala soo bixi software-kan wixii Windows ama Mac .
Orod software iyo xiriiriyaan iPhone. Markaas riix Start Scan.
Markaas, dooro Xiriirada & Messages & Call Log dooro xiriirrada aad rabto in aad soo kabsado. Si fudud u soo ceshano faylasha adigoo gujinaya bogsadaan.
Laakiin, waxa aad naftaada ku badbaadin karto ka qabanayaan dhammaan tallaabooyinka. Waxaad ku rakiban kartaa Wondershare Dr Fone aad iPhone / qalab Android. Wondershare Dr Fone waa app awood ilaaliya oo kaa caawinaysaa in aad soo kabsado xogta. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad iskaan oo ku eegaan oo dhan xiriirada, fariimaha, taariikhda WhatsApp, sawiro, dokumentiyo, oo xitaa ka badan, ka dibna la doorto midda aad rabto in aad soo kabsado.
> Resource > Ladnaansho > Sida loo soo ceshano Xiriirada tirtiraa Gmail / Muuqaalka / Android / iPhone